Alshabaab oo dib ula wareegay jannaale – Biyacade
September 19, 2015 September 19, 2015 biyacade
Alshabaab oo dib ula wareegay jannaale
Alshabaab ayaa dib ula wareegay janaale.
Janaale marnaba ma iloobi doonaan ciidamada shisheeyaha ah ee soomaali ku sugan gaar ahaan kuwa tugaandha.
Janaale waxaa lagu dilay in ka badan ciidama shisheeye ee yugaandha oo tiradoodu gaareeyso 50 asgari.
Dabcan shabaab ayaa cashar lama iloobaan ah u dhogay gaalada amisom ee yugaandha oo ku sugan meela ka mid ah soonaaliya.
Previous Daawo sawiradda
Next Shabaab oo l wareegay yaaqbari-weeybe